ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်​နဝါရီ ၂၁ရက်​​နေ့ဟာ FBS ကုမ္ပဏီအတွက်​ အလွန်​အ​​ရေးကြီးတဲ့​နေ့တစ်​​နေ့ဖြစ်​ခဲ့ပါတယ်​. ထို​နေ့စ​နေ့​နေ့ည​နေပိုင်းမှာ, ထိုင်းနိုင်​ငံရှိ traderများ partnerများနဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ်​အဖြစ်တွေ့ဆုံပွဲကြီးကို ကြီးကျယ်​ခမ်းနားစွာကျင်းပဆင်​နွှဲခဲ့ကြပါတယ်​. ဤကိစ္စကို ပြန်​​ပြရမယ်​ဆိုရင်​​​တောင်​စိတ်​လှုပ်​ရှားလွန်းလို့, ကြုံဖူးသမျှပွဲ​တွေထဲမှာ အ​ကောင်းဆုံးပွဲတစ်​ခုပါဆိုတာကလွဲလို့ ​ပြောစရာစကားရှိမှာမဟုတ်​ပါဘူး!
တွေ့ဆုံပွဲကို ထိုင်းနိုင်​ငံရဲ့အလှဆုံးဟိုတယ်​​တွေထဲ တစ်​ခုအပါအဝင်​ဖြစ်​တဲ့, Pullman Bangok Grande Sukhumvitဟိုတယ်​မှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်​. ဟိုတယ်​ရဲ့ ဧည့်​ခန်းမ​ဆောင်​မှာစုရုံး​ရောက်​ရှိ​နေကြတဲ့ ဧည့်​သည်​​တော်​များကို လှပပျိုမြစ်​တဲ့မိန်းမ​ချောက​လေးများနှင့်​ အထူးပြုလုပ်ချက်​​ကျွမ်းကျင်​သူတို့​ဖျော်​​ဖြေဧည့်​ခံတဲ့ရှိုးပွဲနှင့်​​တွေ့ဆုံပွဲကိုဖွင့်​လှစ်​​ပေးခဲ့ပါတယ်​. ထို​နေရာမှာ မိနစ်​အနည်းငယ်​စာ​လောက်​​တော်​​တော်​​လေးကိုလူ​တွေပြည့်​ကြပ်​သွားတဲ့အထိဖြစ်​ခဲ့ပါတယ်​,ဒါဟာ အံ့အားသင့်​ဖွယ်​တစ်​ခု​တော့မဟုတ်​ပါဘူး,ဘာလို့လဲဆိုရင်​ တက်​​ရောက်​မယ့်​လူစာရင်းမှာ လူ​တွေအပြည့်​ပဲမို့ပါ.
FBSရဲ့ထိပ်​တန်းအုပ်​ချုပ်​​ရေးအဖွဲ့ဝင်​​တွေကလဲ trader​တွေနဲ့partnerများအား FBSကို​ရွေးချယ်​တဲ့အတွက်​​ကျေးဇူးတင်​ဂုဏ်​ပြုစကား​ပြောဖို့ ပွဲ​ကို​တက်ေ​ရာက်​​လာခဲ့ပါတယ်​. တက်​​ရောက်​လာတဲ့သူတိုင်းကတစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​ရင်းရင်းနှီးနှီးမိတ်​ဆက်​ခင်​မင်​ကြတဲ့အပြင်​ FBSက သူ့ရဲ့​ဖော်​သည်​​တော်​ကြီး​တွေအတွက်​ဘာ​တွေစီစဉ်​ပြင်​ဆင်​ထားမလဲဆိုပြီး စိတ်​လှုပ်​ရှား​နေခဲ့ကြပါတယ်​. တက်​​ရောက်​လာသူအားလုံးဟာ အလွှာစုံ အရွယ်​စုံ ကျား/မအစုံဖြစ်​ပြီး မိမိတို့အနှစ်​သက်​ဆုံးအလုပ်​ဖြစ်​တဲ့ FBSမှာ tradingလုပ်​တဲ့​အ​ကြောင်း​ပြောဆိုရင်း အားလုံးတစ်​စုတစ်​စည်းတည်းစည်းစည်းလုံးလုံးရှိခဲ့ပါတယ်​.
သူတို့​တွေဟာ တစ်​​ယောက်​နဲ့တစ်​​ယောက်​အပြန်​အလှန်​​ဖော်​​​ရွေချစ်​ကြည်​စွာနဲ့ အမှတ်​တရဓာတ်​ပုံ​တွေရိုက်​ကူးကြခဲ့ကြပြီး အားလုံ​ပျော်​ရွှင်​​နေကြတာကိုကြည့်​ရတာ FBSမိသားစုကြီးတစ်​ခုလိုပါပဲ. ကြီးကျယ်​ခမ်းနားတဲ့ Pullman Bangkok Grande Sukhumvit ဟိုတယ်​ကြီးရဲ့​​ဟောလ်​ခန်းကျယ်​ကြီးကို အခမ်းနားဆုံးဖြစ်​​အောင်​အ​ကောင်းဆုံးခင်းကျင်းပြင်​ဆင်​ထားတာကလဲ​တွေ့ဆုံပွဲညချမ်းကို ပိုမိုပြည့်​စုံ အသက်​​ဝင်​သွား​စေပါတယ်​. ကုမ္ပဏီရဲ့ ထိပ်​တန်းအကြီးအကဲ​တွေရဲ့ ​ဟော​ပြောချက်​​တွေနဲ့ ကုမ္ပဏီရဲ့ တင်​ပြချက်​​တွေနဲ့ ဂီတ​တေးသံ​တွေနဲ့ အကအလှ​​ဖျော်​​ဖြေမှု​တွေက​တွေ့ဆုံပွဲကို ပိုမိုမြိုင်​ဆိုင်​သွား​စေခဲ့ပါတယ်​.
ဧည့်​သည်​​​တော်​​တွေရဲ့အဆိုအရ​တွေ့ဆုံပွဲရဲ့​ဖျော်​​ဖြေမှု​တွေထဲမှာ ရိုးရာအကအစီအစဉ်​နဲ့ Thousand Hands of Buddha​တင်​ဆက်​​ဖျော်​​ဖြေမှုဟာ တကယ့်​ကိုထူးခြား​ကောင်းမွန်​ခဲ့တယ်​လို့ဆိုပါတယ်​. ညဘက်​ ရှိုးပွဲအစီအစဉ်​ကလဲ တက်​​ရောက်​ခဲ့တဲ့သူတိုင်းကိုကြည်​နူး​စေခဲ့ပါတယ်​​. ရှိုးပွဲမှာလှပ​ချော​မောတဲ့ အဆို​တော်​များသာမက နာမည်​ကြီးdancerများနဲ့ဟာသလူရွှင်​​တော်​များလဲ ပါဝင်​​ဖျော်​​ဖြေခဲ့ပါတယ်​!
ပွဲမှာအားလုံးအတွက်​ စိတ်​လှုပ်​ရှားခဲ့ရတဲ့အချိန်​က​တော့ ဆုမဲ​နှိုက်​ပြီး ကံစမ်းမဲ​ဖောက်​​ပေးတဲ့အချိန်​ပါပဲ. ဧည့်​သည်​​တော်​များအတွက်​ FBSမှတန်​ဖိုးကြီးဆုလက်​​ဆောင်​များကိုမဲ​ဖောက်​​ပေးခဲ့ပြီး ကံအ​ကောင်းဆုံးဧည့်​သည်​​တော်​​တွေက​တော့ iPhoneအသစ်​​တွေ iPadအသစ်​​တွေရရှိသွားပြီး တချို့ဆိုရင်​ MacBook Proတို့ iMacတို့အထိ ကံထူးသွားကြပါတယ်​! ဆုရရှိတဲ့ကံထူးရှင်​​တွေရဲ့ ဝမ်းသာအားရ​​ပျော်​ရွှင်​​နေတဲ့မျက်​နှာကိုမြင်ခဲ့ရပြီး ​အလွန်​​ကျေးဇူးတင်​တဲ့စကားသံ​တွေကို နား​ထောင်​ခဲ့ရတာဟာ တကယ့်​ကို​ကျေနပ်​ပီတိဖြစ်​ခဲ့ရပါတယ်​.
ချစ်​မိတ်​​ဆွေ​တော်​traderများနဲ့ partnerအ​ပေါင်းကို ထိုကဲ့သို့​သော​ပျော်​ရွှင်​ပွဲည​နေခင်းဖြစ်​ခဲ့တဲ့အတွက်​ထပ်​မံပြီး​တော့​ကျေးဇူးတင်​စကား​ပြောကြားလိုပါတယ်​,ချစ်​မိတ်​​ဆွေတို့ရဲ့ အား​ပေး​ထောက်​ပံ့မှုမပါခဲ့ရင်​ ဒီပွဲကြီးဖြစ်​​မြောက်​ခဲ့မှာမဟုတ်​ပါဘူး! ​နောက်​နှစ်​မှာ ဒီလို​တွေ့ဆုံပွဲမျိုးထပ်​လုပ်​ကြ​ရ​အောင်​​နော်​!FBSနဲ့ပြန်​ဆုံမယ်​​နော်​!